Kaydka Suugaanta Somaliland
Maahmaaho; maahmaahdu waa qayb ka mid ah suugaanta Somalida kana kooban tixo xambaarsan xikmad marmarna qeexan marna maldahan, intooda badana lama yaqaan cid samaysay iyo goor la sameeyay. Mahamaahda si gooni ah ayaa loo isiticmaalaa waana waxa qudha ee had iyo jeer ku jira hadalkeena, waxay soo koobtaa hadal aad in badan odhan laheyd, badanaa waxa isticmaala qofba qofkuu ka dalyaqaanno, ka waayo aragsanyahay, kana afatahansanyahay ama uu ka aqoon weyn yahay.
Waxaase la moodaa in dhalinyarada qurbaha u soo dhooftay ama ku barbartay aanay aqoon u lahayn habka loo istimaalo iyo meelaha ay ku haboontahay in la galiyo toona. Sidaa daraadeed ayay u ektahay inay gabaabsi yihiin oo leyska dhaafay isticmaalkeedii, waase nasiib daro sababtoo ah maahmaahdu waa udub dhexaadkii suuganteena.
Maahmaahyo Eray Eray u kala soocan.
Erayga A Erayga B Erayga C Erayga D Erayga E Erayga F Erayga G Erayga H Erayga I Erayga J Erayga K Erayga L Erayga M Erayga N Erayga O Erayga Q Erayga R Erayga S Erayga T Erayga U Erayga W Erayga X Kaydka Suugaanta Somaliland